‘राजनीति विशुद्व समाज सेवा हो’ - Paschimnepal.com
‘राजनीति विशुद्व समाज सेवा हो’
गुराँस गाउँपालिका वडा नम्बर ८ निवासी भक्त बहादुर केसी विगत २९ बर्षदेखि नेपाली काँग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा छन् । ०४९ सालमा भएको स्थानिय निकायको निर्वाचनबाट साविकको लालिकाँडा गाविस उपाध्यक्षबाट शुरु भएको राजनितिक यात्रा यथावत छ । समाज रुपान्तरणका लागि राजनीतिक यात्रा शुरु गरेको बताउनु हुने उहाँसंग पत्रकार टेकराज केसीले गरेको कुराकानीका सम्पादित अंश :-
मेरो पेशा नै राजनीति हो । अहिले पनि पार्टीको काममा व्यस्त छु । समाजसेवालाई पनि तरन्तरता दिइरहेको छु ।
राजनितिमा होमिने प्रेरणा कोबाट पाउनुभयो ?
नेपालमा निदर्लिय शासन व्यवस्था थियो । अहिलेको गुराँस गाउँपालिकाका विभिन्न गाउँहरुको पछाडी परेको थियो । यसलाई परिवर्तन गर्दै एकदलिय शासन व्यवस्थाका विरुद्ध लाग्नुपर्छ भन्ने भावना जाग्यो । यसको परिवर्तनको लागि म लागेको हुँ ।
शुरुमा मेरो राजनितिक यात्रा सिता मावि अवलपराजुलमा अध्ययन गर्दा गर्दै विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीतिमा आस्था राख्थे । नेपाली कांग्रेस निकट भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको सभापतिबाट राजनिति शुरु गरेको हुँ । मलाई राजनितिमा लाग्नुपर्छ भन्ने प्रेरेरणा श्रदय गुरु रविन्द्रराज श्रेष्ठबाट प्रेरणा मिलेको हो ।
पार्टी त अरु पनि थिए, तपाईको रोजाइमा काँग्रेस नै किन प¥यो ?
काँग्रेस एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो । नेपालमा लामो समय चलेको राणा साशनले जनतालाई दवावमा राख्ने काम ग¥यो । त्यसको अन्त्य गर्न काँँग्रेसले नै नेतृत्व ग¥यो । र त्यो सफल पनि भयो । हरेक कालखण्डमा भएका परिवर्तन र त्यसको संस्थागत गर्नमा कांग्रेस सफल भएको छ । यस अर्थमा पनि मेरो रोजाई कांग्रेस बन्न पुगेको हो ।
यो लामो समयमा राजनीतिमा लागि रहँदा म स्वर्गीय विपी कोइराला, कृष्ण प्रसाल भट्टराई लगायतका नेताहरुलाई हरेक दिन सम्झने गरेको छु । यदि उहाँहरुको योगदान र सक्रिय लगनशिलता नभएको भए अहिले हामी यो अवस्थामा बस्न सक्ने अवस्था थिएन ।
अहिले स्वतन्त्र रुपमा राजनितिक दल खोल्न पाउने, स्वतन्त्ररुपमा हिडडुल गर्न पाइने थिएन् । आज उहाँहरुकै कारण समाज रुपान्तरणको एउटा मार्गचित्र बनेको छ ।
सक्रिय रुपमा काँग्रेसको राजनितिमा हुनुुुहुन्छ, अनुभव के छ ?
मेरो राजनिति अनुभव लामो छ । सबै भन्न अहिले असम्भव पनि त छ । विद्यार्थी राजनितिबाट शुरु भएको मेरो यो यात्रा जिल्ला कार्य समितिको सदस्यसम्म पुग्दा मलाई के लाग्छ भने राजनिति विशुद्ध समाजसेवा हो । पछाडी रहेका वर्ग समुदायलाई अगाडी ल्याउने काम राजनितिभित्र हुनुपर्दछ ।
यसलाई कमाउने भाडोको रुपमा लिन खोज्यो भने त्यसलाई राजनितिक परिभाषाको रुपमा राख्दा समस्या हुन्छ । २०४९ सालमा म जनप्रतिनिधि भएर काम गरे मैले समाजलाई गतिशिल बनाउन धेरै प्रयत्नहरु गरेको छु । परिवर्तन रातारात हुने कुरा होइन । यो विस्तारै हुने गर्दछ ।
तर केहि हदसम्म मैले महिला, दलित, पछाडी पारिएका वर्गहरुलाई अगाडी ल्याउने प्रयत्न गरेको छु । त्यसैको फलस्वरुप अहिले यस गाउँपालिकामा सबै जाती, भाषी, विभिन्न धर्म मान्ने मानिसहरु आफ्नो अधिकारको बारेमा जानकार हुन थालेका छन् । अर्को एउटा रोचक अनुभव भन्नुपर्दा राजनितिले जुनसुकै कुरा पनि परिवर्तन गर्न सक्दो रहेछ भन्ने अनुभव भएको छ ।
राजनितिमा तपाईले हार पनि बेहोर्नुपरेको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
राजनिति भनेको एउटा यस्तो प्रक्रिया हो, यसमा जित हार दुवै हुन्छ । राजनिति एउटा खेल जस्तो हो । विश्वका हरेक प्रजातान्त्रिक देशहरुमा हेर्नुहोस् चुनावमा लडेका दुइवटै पक्ष जितेको देख्नुभएको छ र ?
राजनितिलाई सधै जितको रुपमा लिन थाल्यो भने उ असल राजनितिज्ञ हुन सक्दैन । हारले राजनिति गर्ने व्यक्तीको कमजोरी औंल्याउने काम गर्ने गरेको हुन्छ । मैले पार्टीमा होस या जनताको विचमा कुनैबेला हारेको छु भने कुनैबेला जितेको छु । यसलाई म सामान्य रुपमा लिने गर्छु ।
लामो समय राजनिति गर्दा पारिवारिक साथ कत्तीको पाउनुभयो ?
मलाई राजनितिमा परिवारको साथ धेरै मिलेको छ । मेरो बुवा धनसिंह खत्री अहिले उहाँ स्वर्गीय भइसक्नुभयो । राणाकालिन समयमा विपी कोइरालाहरुसँग भारतको बनारसमा गएर राजनितिक शिक्षा लिनुभएको थियो । केहि परिस्थितिका कारण सक्रिय भएर नलागेको भएपनि मलाई राजनिति गर्न उहाँले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ ।
यस्तै भाईहरु, मेरो श्रीमती लगायतले मलाई राजनिति गर्न साथ धेरै दिनुभएको छ अहिले पनि उहाँहरुबाट पुर्ण साथ पाएको छ ।
अब अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ ?
राजनिति भन्नाले एउटा नीति निर्माण गर्ने हो । परिस्थिती सुहाउदो समाजको निति परिवर्तन गर्ने हो । यसैले यसको लागि अन्य राजनिति गर्ने व्यक्तीहरुपनि राजनितिलाई कमाई खाने भाडोको रुपमा हैन सेवाको रुपमा लिइनुपर्दछ । आगामी दिनहरुमा म यस गुराँस गाउँपालिकामात्र हैन दैलेख जिल्लाकै परिस्थिति परिवर्तन होस चाहान्छु ।
प्रकाशित मितिः शनिबार, भदौ ३१, २०७४ 7:34:55 AM
Prevजाजरकोट अस्पतालमा प्रसुति शल्यक्रिया सेवा सुरु
Nextसिँचाइमन्त्रीको भेरीबबई डाइभर्सन आयोजनाको निरिक्षण ‘निर्धारित समयमै काम सक्नुस्’